चीन र भारतसँगै एसियाको पुनरुदय होला ? - Karobar National Economic Daily
चीन र भारतसँगै एसियाको पुनरुदय होला ?
query_builderMay 10, 2017 1:30 PM supervisor_accountतारुष भल्ल visibility1403
चिनियाँका लागि विश्व बजारमा जानु विकल्प र चाहनाको विषयभन्दा पनि बाध्यताको विषय बनेको छ ।
एकातिर ११.३ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र छ भने अर्कातिर २.१ अर्बको । के तपाईं यी दुईबीच तुलना गर्न सक्नुहुन्छ ? रहस्यमय ड्रागन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो भने अर्कातिर बलियो हात्ती आजको छैटौं तहबाट विश्वको दोस्रो तहमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यी दुईको तुलना तर्कहीन भने होइन ।
तुवाँलोले भरिएको बेइजिङमा भारतीय उद्यमी घस्रिरहेका देखिन्छन् र त्यहाँका पदयात्रीले उनीहरूलाई श्रद्धा गरेको देखिन्छ । तुवाँलोले यहाँका स्काइक्रेपर र फ्लाइओभरहरूलाई लुकाउन सक्दैनन् । विगतका दशकहरूमा यो सहर जुरुक्कै उठेको चिनियाँहरू बताउँछन् । तीन दशकअघि यो सहरको अनुहार चार क्षेत्रका पर्खालले घेरिएको थियो । चिनियाँहरूले यति छिटो यो उपलब्धि हासिल गरेकोमा छक्कै पर्नुपर्ने हुन्छ ।
कतिचाहिँ ठूलो हो ?
चीनको जनसंख्या १.४ बिलियन रहेको सन्दर्भमा यसको अर्थ के होला ? विश्वको निर्माण सामग्रीमध्ये आधा चीनमा खपत हुन्छ । सहरीकरणको दर १९.७ बाट २०१० मा ४९.७ मा उक्लियो । राम्रो शिक्षा र अवसरका लागि चीनका हरेक मान्छे सहरतिर जान चाहिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले अहिले आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा पढाइ पूरा गर्न भनिरहेको छ ।
चिनियाँ थिंक ट्यांक चाइना एकेडेमी अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीका अनुसार चीनको इन्टरनेट उद्योग २०१६ मा १७९ अर्ब डलर पुगेको छ । यहाँको ६० प्रतिशतले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ९४ प्रतिशतले मोबाइलबाट नेट चलाउँछन् ।
भारतमा हेर्ने हो भने पनि यो संख्यामा त्यति धेरै अन्तर देखिन्न । इन्टरनेट एन्ड मोबाइल एसोसिएसन अफ इन्डियाको प्रतिवेदनअनुसार जुन २०१७ सम्ममा भारतमा इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता ४ सय ५० देखि ४ सय ६५ मिलियन पुगेका छन् भने इन्टरनेटको पहुँच ३१ प्रतिशतमा पुगेको छ । जनवरी २०१७ सम्ममा एप्लिकेसन स्टोरबाट १ सय ५० हजार एप्लिकेसन उपयोग गरिएको छ, जसमध्ये १० हजार एप्लिकेसन चिनियाँ बजारबाट थिए । ५० हजारभन्दा बढी वेबसाइट चीनमा दर्ता गरिएका छन् ।
अर्कातिर, चिनियाँ इन्टरनेट बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा छ । सबैभन्दा बढी उदीयमान एप्सहरूमा हरेक क्षण परिवर्तन भइरहन्छन् र दुई वर्षमा मात्रै उत्कृष्ट ५० वटा एप्सले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाएका छन् । डिजिटल भुक्तानीका लागि अलिपे मुख्य छ, जसले बजारमा ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । बाँकी ५० प्रतिशत विच्याटपे, टेन्सेन्ट आदिले भुक्तानी सेवा दिइरहेका छन् ।
चीनका इन्टरनेट संगठनहरू चीनभन्दा बाहिरका सेयर बजारमा सूचीकृत छन् । बैदु, अलिबाबा र टेन्सेन्ट प्रमुख छन् । एप्पल, एल्फाबेट, एमाजोन र फेसबुकपछि टेन्सेन्टको स्थान आउँछ, जसको बजारमूल्य २०६ बिलियन अमेरिकी डलर छ । यसको वार्षिक आम्दानी १६ बिलियन छ । त्यसपछि ई–कमर्स समूह अलिबाबा आउँछ, जसको बजार मूल्य २ सय ५ बिलियन अमेरिकी डलर छ । यसले वार्षिक २५ बिलियन अमेरिकी डलर आम्दानी गर्छ । त्यस्तै बैदुको बजारमा ६२ बिलियन र यसको वार्षिक आम्दानी १० बिलियन अमेरिकी डलर छ । स्मार्टफोन उत्पादक स्याओमीको बजार मूल्य ४६ बिलियन अमेरिकी डलर छ ।
गुगल, एमाजोन र उबरले उनीहरूलाई विश्वभरि फैलन प्रोत्साहित गरेको चिनियाँ व्यवसायीको भनाइ छ । विश्व अर्थतन्त्रलाई हेरेर पश्चिमका फर्महरूले स्तरीय सेवाबाट विश्व बजार खोसी आफ्नो हिस्सा विश्वभर फैलाएका छन् । तर, चीनले यसविपरीत ‘स्थानीय उत्पादन, स्थानीय बजार’ भन्ने नीति लिएको छ ।
सबै चम्किला वस्तु हीरा हुँदैनन् । बजारलाई राम्ररी पछ्याएर बैदु, अलिबाबा, टेन्सेन्ट आदिले लगानी बढाएका छन् र नयाँ खालका व्यवसाय र क्षेत्रमा हात हालिरहेका छन् । तर, चीनका स्टार्टअपहरू यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुन छाडेका छन् । उदाहरणका लागि १ अर्ब प्रयोगकर्ता भएको भनी दाबी गर्ने आपुसलाई हेरौं । यसको चिनियाँ प्रयोगकर्ता भने ५ लाख मात्रै छन् । यसले उनीहरू चीनप्रति आकर्षित नभएको देखाउँछ ।
किन चीन विश्वव्यापी बन्दै छ ?
चीनलाई विश्व रणनीतिमा सानो खेलाडी भन्नु गलत हुन सक्छ, जबकि उनीहरूको अस्तित्व वास्तवमै हुर्कंदै छ । भारतजस्ता बजारमा चीनका कम्पनीहरूको सफलता रहस्यपूर्ण छैन । विद्युतीय उपभोक्ता कम्पनी सायोमीले के दाबी गरेको छ भने भारतका लागि ऊ दोस्रो ठूलो स्मार्टफोन उत्पादक हो । यसले भारतमा गत वर्षको दीपावलीमा मात्रै १ करोड ३६ लाख उपकरण बेच्यो, जबकि २०१६ मा आपुसका विश्वभरिका उपयोगकर्तामध्ये २० प्रतिशत भारतीय रहे ।
यी कम्पनीहरूलाई केले विश्व बजारमा लगिरहेको छ त ? चिनियाँहरूको रणनीति छः कि विश्वबजारमा जाऊ, कि त ग्रामीण बजारमा जाऊ । चिनियाँहरूका लागि विश्व बजारमा जानु विकल्प र चाहनाको विषयभन्दा पनि बाध्यताको विषय बनेको छ । यस्तो किन भएको छ भने चीनको सहरी बजारमा मोबाइल इन्टरनेट उत्पादक र सेवाहरू व्यापक रूपमा भित्रिइरहेका छन् । त्यसैले उनीहरू भारतीय बजारहरूमा चाँडै विस्तार हुन सकेका हुन् । चिनियाँ प्रविधिका लागि वैश्वीकरण बढ्दो रूपमा अपरिहार्य बन्दै गएको छ र विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि यसको बजार खुल्दै गएको छ ।
केही समयअघिसम्म बन्द रहेको तथा भाषिक अवरोध, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक, आर्थिक नीतिहरू भिन्न रहेको चीनको विश्वासको तह बढ्दै आएको छ । चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरू आईपीओमा सफलता भएका छन् । यससँगै रणनीतिक लगानी गरी घरेलु पुँजीको प्रवाह बढेको छ । अर्को, बढी मात्रामा उत्पादन गर्दा कतिको प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्नेमा चीन परिपक्व भएको छ । यी सबै तत्वले चिनियाँ व्यवसायीहरूलाई उदीयमान बजार बन्न र धेरै परिमाणको बजार हासिल गर्न समर्थ बनाएको छ ।
त्यस्तै उदीयमान बजारमा लागतसमेत सस्तो पर्छ, जसले गर्दा चिनियाँ फर्महरूलाई यस्तो बजारमा काम गर्न आकर्षित गरिरहेको छ । हाङजाउस्थित ठूलो कम्पनी अलिबाबाको आम्दानीमध्ये देशबाहिरको हिस्सा ७ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसैले ऊ अहिले त्यहाँबाट बाह्य देशमा फैलने प्रक्रियामा छ । चिनियाँ ठूला सफल फर्महरूका लागि अहिले भारत ठूलो केन्द्रमा छ ।
चिनियाँ लगानीको गन्तव्य भारत ?
हुन त चिनियाँहरूले भारत उच्च प्राथमिकताको सूचीमा नपरेको बताउँछन् । लगानीकर्तालाई चिनियाँ भेन्चरहरूले अहिले पुँजी बढाउन चारवटा कुरा सिकाएका छन् ः पुँजी बढाऊ, यो लगानी गर, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर र सफलता रहिरहने कुरामा दृष्टि देऊ । अहिले चिनियाँ बजारमा ठूलो पुँजी छ र उच्च विकास छ । भारतमा पनि यस्तै हुने सम्भावना छ ।
चिनियाँ लगानीकर्ताहरू भारतीय व्यवसायको लगानीका अवसरहरू खोजिरहेका छन् । यस्तोमा भारतीयहरूले त्यस्ता व्यवसायहरू के–के हुन सक्छन् त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । भारतको वृद्धिका लागि पूर्वाधार ठूलो मुद्दा हुन सक्ने चिनियाँ लगानीकर्ताको सोचाइ हुन सक्छ । अहिले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले भारतीय बजारको मूल्यांकन गरिरहेका छन्, तर उनीहरूले सक्रिय रूपमा लगानी गर्न केही वर्ष लाग्न सक्छ; तैपनि रणनीतिहरू भने तय भइरहेका छन् ।
भारत र चीनको सम्मिलन होला ?
चीन ई–कमर्स, लजिस्टिक र भुक्तानी प्रणालीमा अगाडि छ भने भारत सफ्टवेयर क्षेत्रमा सक्षम छ । भारत स्वतन्त्र बजार भएकाले एकातिर यो सहयोगी छ भने अर्कातिर विश्वका प्रतिस्पर्धीहरूले चिनियाँ लगानीलाई पछार्न पनि सक्छन् । तर, भारत र चीनबचि भिन्नताभन्दा पनि समानता बढी छ । विगतमा चिनियाँ फन्ड सुरु हुनुअघि पश्चिमा फन्डहरूले प्रभाव थियो ।
दोस्रो, भारतमा जस्तै चीनमा पनि कम्प्युटर प्रयोग नगरी मानिसहरू सीधै मोबाइलमा झुत्तिएका छन् । यसले चिनियाँ लगानीकर्ता लोभिएका छन्, तर नेटवर्क कमजोरीका कारण उनीहरूलाई केही चिन्ता हुनचाहिँ सक्छ । पूर्वाधार बलियो नबनाउनु, ऊर्जा खपत बढी हुनु, स्थानीयका लागि नयाँ वस्तु दिनु आदि कमजोरी रहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले पूर्वाधारमा ठूलो अवसर देखेका छन् । चीनमा नेटवर्क तीव्र रूपमा बढेको छ भने स्केलिङ प्रोसेस पनि तीव्र छ । नाफायोग्य व्यवसाय पाएपछि चिनियाँ आत्मविश्वास बढ्छ र नगद प्रवाह बढ्छ ।
भारत चीन अर्थतन्त्र